June 18, 2019 – Warsame Digital Media WDM. "GET USED TO FREE PRESS"
SOOMAALIYA: KALA GUUR, KALA HAYAAN AMA KALA SOCOD
Garowe, June 18, 2019
Waxay ahayd in Soomaaliya laga soo saaro godka dheer oo ay gashay laga soo bilaabo 1969 markii la afgambiyey dawlad dadku soo doorteen oo well yaklel ah; dastuurkii lagu heshiiyeyna la tuuray, markaana dadka Soomaalidu kala qaxay, kala guuray ama kala hayaamo – qaar noqdeen kacaan, kuwana kacaan-diid.
Waxaa xigtay kuwo in ay noqdaan mujaahidiin, kuwo kalena faqash, haraadi ama looma ooyaan.
Waxaa halkaa ka dhalatay mujaahid iyo murtad.
Waxay haatan taagantahay Nabad & Nolool iyo maamul gobolleedyo.
Uma eka in taariikhda, haba yaraatee, wax laga bartay. Taa macnaheedu waa ku soco wadadii shalay keentay burburka bulshada dhan walba. Malaha, Juut & Jamaajuutka la sheegaa waa Soomaalida? Bal taa inaga hubiya? Hadayse taa yihiin, sidee wax looga qabankaraa Weynaha ayaa sida u abuuraye?
Ma isleedahay arrintu cilmi-baaris dhexdhexaad ah ayey u baahantahay? Taa lafteedu haday inaga noqoto tira-koobkii Wasiir Caynte ama sheegashadii, dhul iyo dad balaarsigii Jeneraal Caydiid, waxba islama heleyno. Waa jugjug meeshaada joog ama gacmo daalis.
Soo markaa ma aha kala guur, kala hayaan ama kala socod, sharkeeda Weynaha aan ka hoos galno.
Author Warsame Digital Media WDMPosted on June 18, 2019 June 19, 2019 Categories UncategorizedLeave a comment on SOOMAALIYA: KALA GUUR, KALA HAYAAN AMA KALA SOCOD
Author Warsame Digital Media WDMPosted on June 18, 2019 Categories UncategorizedLeave a comment on KHATARTA EBOLA